Kamgold - ကိုနှစ်ချက်ကော်စက်, Hangtag စက်ဘက်
စက်ချွတ် Hangtag တစ်စက်
Tag ကိုတူးဖော် eyelet machinene
Hangtag Threader စက်
စားပွဲတင်ထိပ်တန်း banding စက်
KAMGOLD ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပိုးစက်စက်ရုံပုလဲမြစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်စက်မှုမြို့ Dongguan မှာတည်ရှိပါတယ်, 2005 ခုနှစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေးအခေါ်, အမှတ်တံဆိပ်, tags များ, ဖောက်သည်များအတွက်တံဆိပ်များ, Post-စာနယ်ဇင်းအော်တိုထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုး၏ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုကို "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပေါ်အာရုံ" ကိုလိုက်နာရန်ပါပြီ။
ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနှစ်ပြီးနောက်စက် threader တစ်ဦးအပြည့်အဝအလိုအလျှောက် hangtag တီထွင်ခဲ့ပြီး eyelet စက်, အော်တိုမျိုးစုံခေါင်းစီး RFID တံဆိပ်ကပ်စက်ထွန်ယက်ရာတွင်အလိုအလျောက် tags များ, ကော်စက်ကို double-ဘက်နှင့်ဒါလုံလောက်သောမူပိုင်ခွင့်အပေါ်နှင့် Post-စာနယ်ဇင်းအလိုအလျောက်ကိရိယာစျေးကွက်အသိအမှတ်ပြုမှုဖြစ်လာ ထုတ်လုပ်သူ။
ကျနော်တို့စုံလင်သောအတူဖောက်သည်ပေးရန်ကျူးလွန်နေကြသည် postpres s ကို အကျိုးခံစားခွင့်ကိုဖန်တီးရန်, ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်လူအင်အားကယ်တင်တော်မူ၏, ဖြေရှင်းနည်းများ.
GYJ-820 အလိုအလျောက်လေးခေါင်းစီး RFID တံဆိပ်ကပ် ma ...
DTJ-320 အလိုအလျောက် RFID တံဆိပ်ကပ်စက်
ကေဗွီ-230 အလိုအလျောက် tag ကိုတူးဖော် eyelet စက်
က M-16 မှာ Automatic elasticity့String Hangtag Threader ...
350-AS အလိုအလျောက်နှစ်ချက်ပိုငျးပိုငျး Hangtags Threading ...
FX-250 အလိုအလျောက် Hangtag အရေးအကြောင်းတွေစက်
KG-800B ကို Double-တဖက်သတ်ကော်စက်
KG-800 မှာ Automatic ကို Double-တဖက်သတ်ကော်စက်
K02-20 ဇယားထိပ်ဆုံး banding စက်
CF-800 Powder သန့်ရှင်းရေးစက်
စက်ချွတ်တီဘီ-1680 အလိုအလျောက် hangtag တစ်စက်
CG-130T အလိုအလျောက် Hangtag Threader စက်
The future automatic boxing machine industry will enter the era of electronic intelligence
In recent years, China’s automated packaging equipment is developing rapidly. Automated pac...
Characteristics of gravure printing ink and its relationship with printing
SOLVENT-BASED INTAGLIO PRINTING INK viscosity is too high, resulting in scratches, color, and ver...
လိပ်စာ: အမှတ်2Chongkou စက်မှုဇုန်, Shijie, Dongguan
Stripping Machine, ချည်ထုံးစက် , ထုံးစက် ,